Twin Seoul Stage Danho rechipiri ne "bvunzo" ndizvo
トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Twin Seoul Stage Danho rechipiri ne "bvunzo" ndizvo
Kubva mokusangana nzira
mapatya Seoul kuwana [3500 Yen Free yokunyatsoongorora] chaiyo vanoziva remangwana kana zvinofunga, kana iwe kuedza kudzokera zvakare mumwe mweya, zvinonzi kuva nechokwadi apfuure nzendo nomwe. Mune wokutanga Danho kubvuma mumwe, uye kubvunzurudza zvakasimba uye chisinga- mumudzimu, asi Kare nguva Vanoratidzira inonzi "muedzo" rechipiri pechikuva.
Izvi akati kuva wekutanga kuonekwa dambudziko iri achipfuura nzendo nomwe. Kamwe kare yomudzimu, dariro kutarisana dambudziko chaiye Danho rechipiri. The "muedzo", apo vanoziva kuti uri vakwezvane zvakasimba mumwe, ari kuti kufungisisa dambudziko chairo apa imwe nhamo sei kuti mberi kune inotevera pachikuva.
saka kure nokuti vanhu vaviri vakanga vauya upenyu hwakasiyana zvachose, iwe havazokwanisi kuva mumwe saka nyore kunyange mweya ishamwari. Saka kure kuzvikudza pachake kuti kwave kukudziridzwa neimwe youpenyu, kuti zvichaita kushora dashes kusiya pfungwa kuti vakawana pakutanga danho.
pakutanga nguva achirwadziwa
? ruzivo uye Danho rechipiri wezivo Kaowodasu
mapatya Seoul Twin Seoul mumwe nomumwe rudo ruzivo rinorambidzwa, mumwe chisinga- zvokunamata ruzivo rokutanga chikuva akangamwa zvichaita kuwana. Izvi, pane kuti mweya kudana mumwe, chiitiko uye ruzivo vakawana umo akararama kusvikira zvino kugara kumikidzo manzwiro.
? uye kuti akundikana murudo kuti ini wakaona
nokusingaperi kuda kuwanikwa mune imprinting pakati nenzira iyi, kuva muranda aripo akadai anotonga kwakaitwa dzavo nezvakaitika Xiang. Saka kutaura, kuti ndizvo yakaramba mupfungwa nenzira kuti imprinting. Kunzwa kuti vade mumwe zvakasimba muna
Danho rokutanga nomumwe, izvozvo kuchapera nokuda yeuka imprinting ichi. Zvadaro, unogona kushora zvomumwe bato iri maererano imprinting, uyewo Movement, akadai kana mwoyo vakaravira kare rudo dzakaguma akabata pfungwa negodo nokufungirana kuti vachabuda.
? chimiro pakuramba kuzorwa naro rave kurimwa munzvimbo dzakaoma
takambosangana chimiro hachisi chokutsanangura zvidzimwe nyore. Yakawandisa kuti akasungwa chimiro, iwe havazokwanisi kuderedza daro pakati mapatya mweya. By Danho ichi, zvikuru kunzwa kuti yokutanga kurwadziwa nguva chikuru chepfungwa rechipiri pechikuva.
mapatya mweya nemumwe, kuti kana anogona kukunda dambudziko anokundwa Danho ichi chechipiri inobviswa mune remangwana kiyi
chimiro chake, chave pamwe kazhinji zvakaoma. Nokuda kwechikonzero ichi, mapatya mweya simba mwoyo uye kutambura inotevera pachikuva, uye iwe uchava vanowanzoodzwa kuparadzana.
kashoma, mwoyo uye kutambura kubvisa nhamo yechipiri danho, asi unogona mberi kusvika padariro pairi pasina achisiya pamusoro nekupatsanurwa kwechikuva, zvingava nani kwete kutarisira zvakawandisa. Kana kuti kukurira nhamo, izvozvo chichaitwa pamusoro unotevera pachikuva.
Inogona mberi kusvika padariro pairi pasina achisiya pamusoro di, asi zvimwe havafaniri kutarisira zvakawandisa. Kana kuti kukurira nhamo, izvozvo chichaitwa pamusoro unotevera pachikuva.